I-Cabin Barrington Idlondlobalisa Indawo Yakho Ye-Eco Emvelweni
Salisbury, New South Wales, i-Australia
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Cate
Leli khabethe elivuselelwe kabusha lihlangana ne-World Heritage Barrington Tops National Park. Jabulela ukubukwa okuhle kwehlathi elihle futhi uhlangabezane nezilwane zasendle ezivakashelayo; opholi, ama-Bush turkeys, ama-Lyrebirds ahlala izidleke kanye no-wallaby ohlala khona kanye no-joey wakhe.
Nethezeka futhi ujabulele ukubukwa okuhle kokugoqa kuvulandi, dlala ithenisi, zulazula uye e-Crystal pool ukuze uthole ukucwiliswa okuqabulayo emfuleni noma uhlole ezinye zezindlela ezinhle zokuhamba ehlathini eliwubukhazikhazi. Lena indawo ekhetheke kakhulu.
Esinye sezihambeli zethu, uPhillip, usichaza kangcono le ndawo:
"Lena yindlu encane, ethokomele futhi ehlomele kahle endaweni yehlathi lemvula ekahle kude nocingo, i-inthanethi kanye nokuba matasatasa. Besikufuna nje ngeholide lethu elincane. Ngifisa sengathi ngabe sibe nezinsuku ezingaphezu kwezingu-3. Ukuhamba kahle kwehlathi lemvula, imisindo yezinkulungwane zezinyoni zomdabu, kanye nenqwaba yokuthula nokuphumula. Sisebenzise kakhulu inkundla yethenisi. Besivele sihlela ukuthi singabuyela nini lapho."
Ikhabethe lethu elincane linethezekile futhi liyamukeleka. Ivuselelwe futhi yahlotshiswa ngezimiso ezisimeme ngokugaywa kabusha, kwemvelo nezinto zokwakha. Kufakwe omatilasi be-latex bemvelo abanethezeke kakhulu nemicamelo enelineni eliphilayo namathawula ukunethezeka kweqiniso kunikezwa.
I-verandah yokugoqa iyinhloso eyakhelwe ukuphumula! Jabulela i-cuppa embhedeni wosuku oluyingqopha-mlando, othathwe kwenye yezindlu zasendaweni futhi eyenziwe ngamapulangwe amahle kakhulu egujwa isifunda. I-Bush Bar iyindawo efanelekile yokucwila emibonweni kuyilapho ujabulela isiphuzo esipholile. Noma shisa i-bbq ukuze uthole ukudla okukhululekile phakathi kwezihlahla.
Izwa ukuthula okujulile kokuphumula nokuqabuleka ngempela.
Zitike ngokugeza ekupheleni kosuku. Amanzi atholakala emfuleni oseduze ngakho anikeza ukucwiliswa okuhlanzekile, okuphumuzayo.
Jabulela amanzi ahlanzekile oMfula iWilliams; enye yezindawo ezihlanzekile kakhulu e-Australia. Kunenqwaba yezindlela zokuhamba eziseduze ezihlinzeka kuwo wonke amazinga, ukusuka kokumnene kuye kokuyinselele, konke okukunikeza ukufinyelela endaweni ekhethekile ngempela.
Izimbobo zokubhukuda ezinhle kakhulu zikleliswe kumzila we-Blue Gum, uhambo oluthambile phakathi kwehlathi elihle.
Ikhabhinethi inikezela ngokuhlehla okungenabuchwepheshe - uma umbono wakho wokuphunyuka kwangempela kuyi-inthanethi kanye nendawo engenamakhalekhukhwini le kuyindawo yakho! Ukufakwa kwefoni ephathekayo kuyalahleka uma ungena epaki futhi ngamabomu ayikho i-wi-fi!
Okokuzijabulisa, kukhona ama-DVD ane-TV/monitor, imidlalo yebhodi nezincwadi. Futhi kwabasebenzayo, kukhona ama-racquets wethenisi namabhola anikezwe ukusetshenziswa enkundleni yosayizi ogcwele emagcekeni.
4.80 ·82 okushiwo abanye
Ikhabhinethi ibekwe onqenqemeni lweNdawo Yamagugu Omhlaba ebabazekayo esohlwini lweBarrington Tops National Park. Enye yengcebo yokugcina yasehlathini engonakalisiwe ikulindile.
Ikhabethe liyindawo ekahle yokubalekela imindeni, enezilwane eziningi zasendle nemisebenzi yokugcina izingane zimatasa. Futhi kuyisilungiselelo esikhululekile nesithambile saleyo ndlela yokubaleka yothando, nesilungiselelo sakhona esiyimfihlo nesinokuthula.
I-Cabin isendaweni okwabelwana ngayo nabanye. Ukuqinisekisa ukunethezeka nokuzijabulisa kwawo wonke umuntu kunemfuneko yokuthi noma yimiphi imibuthano yangaphandle noma umsindo omkhulu uphele ngo-10.30pm.
Amalokishi endawo i-Dungog, i-Paterson, i-Gresford ne-Vacy ahlinzeka ngohambo losuku olunomvuzo. Thola imikhiqizo yasendaweni nezinto ezithengiswayo ezimakethe zabalimi noma ujabulele umkhiqizo wasendaweni kwenye yezindawo zokudlela ezinhle zamahhotela noma amathilomu. Ithiyetha yomlando ka-James e-Dungog inikeza i-cinema ecatshangelwe kahle nohlelo lomculo. Sincoma ukuthi uvumele isikhathi sokuvakasha okunjalo lapho ufika noma uhamba njengoba ukuzizwisa kusitshela ukuthi kunzima ukusuka ehlane elinokuthula uma usufikile futhi uzinzile.
IKhabhinethi isendaweni okungeyona indawo yokuhlala ekude futhi ayikho ucingo noma i-inthanethi. Siyaqikelela ukuthi sikuthumelele lonke ulwazi oludingayo ngaphambi kokuhlala kwakho futhi siyatholakala ukuze siphendule noma imiphi imibuzo noma sinikeze noma yiluphi ulwazi lwendawo kusengaphambili.
Uma kwenzeka udinga ukungithinta kunendawo eshisayo yasendaweni, eqhele ngamakhilomitha angu-2.
IKhabhinethi isendaweni okungeyona indawo yokuhlala ekude futhi ayikho ucingo noma i-inthanethi. Siyaqikelela ukuthi sikuthumelele lonke ulwazi oludingayo ngaphambi kokuhlala kwakh…
UCate Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$214.
Hlola ezinye izinketho ezise- Salisbury namaphethelo